HUIZI zvipikiri zvinonamirwa & kuputira kwezvipikiri & gel zvipikiri mitsetse yekugadzira-Zvigadzirwa-Shanghai HUIZI yedhijitari
HUIZI zvipikiri zvinonamirwa & kuputira kwezvipikiri & mugadziri wezvipikiri zvegel
Kuwanda (Zvimedu) 200- 1000
Yakagadzirirwa logo (Min.Ora: 1500 Zvimedu)
Yakasarudzika kurongedza (Min.Ora: 1500 Zvimedu)
Graphic maitiro (Min.Ora: 1500 Zvimedu)
Semi-kurapa gel chipikiri, chinamirwa cheGel chine UV mwenje
Iyo yekuvhara bhegi kurongedza, 20strips / PC, 1PC / bhegi
Hwemhando yepamusoro nemutengo wepamusoro, fekitori yakananga mutengesi
OEM / ODM / Huizi mhando
Zvakanakira zveGel Nail Kit
1. Chengetedzo (iyo Gel Nail mitsetse inogadzirwa kubva chaiyo gel chipikiri uye zvizorwa zvinongedzo)
2. Hapana kukanganisa (zvipikiri hazvizove zvakatetepa, dzorera zvipikiri zvako zvepakutanga)
3. Kubvisa zviri nyore (shandisa kamuti kadiki kemuti kuti ubvise nyore)
4. Nyanganisa zvipfeko, mabhegi, uye zvimwe zvinhu zviri nyore
5. Chengetedza nguva (maminetsi gumi nemashanu akakwana kupedzisa itsva yakanaka Gel Nail)
Chii chinonzi gel nial wrap?
1.Gel zvipikiri hazvisi zvakajairika zvepurasitiki zvipikiri. Izvo zvakagadzirwa nejel nail ingredients, iyo inopenya mushure mekuvhenekera uye inoshamwaridzana nenharaunda.
2.Gel zvipikiri zvinonamirwa zvese zvine kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
3.Gel zvipikiri zvinoputira zvinozvinamatira uye zvinogona kunamatira pazvipikiri zvakananga.
4.Gel chipikiri chinonamirwa chakakodzera kune zvese kushandiswa kwehunyanzvi uye kushandiswa kwemba.
Sampula yekuraira maitiro
1) Samples ye2pcs, ine UV mwenje, mutengi anobhadhara mutoro;
2) Tumira kunze pazuva repiri mushure mekunge tagamuchira yako mizhinji.
isu Email yeiyo nyowani yakatemwa stock, katalog uye akawanda magadzirirwo !!!
Sevhisi kubva Kudhizaini kuenda Kugadzirwa.
OEM zvigadzirwa zvakaitwa accroding kuchikumbiro mutengi.
FOB uye CIF kutumira kana Airport kutakura.
Chikwata chedu chekugadzira chinogona kukubatsira kupedzisa zvigadzirwa zvako artwork.
Zvezvinhu zvakawanda, Tinogona kukubatsira kutumira kuAmazon FBA zvakananga.
Shanghai Huizi Cosmetics Company yakazvarwa uye yakamisa rabhoritari yekutsvagisa manicure muna 2010. Tine kodzero dzakazvimirira dzepfuma mundima iyi, tichitarisa patsvakiridzo yemanicure, dhizaini, ODM uye OEM kwemakore gumi nerimwe. Zvigadzirwa zvepakutanga zvinosanganisira chinamira chezvipikiri, chinamira chezvipikiri, chitupa chemwana, uye zvimwe zvigadzirwa zvinotsigira manicure. Tine 11 square metres yekugadzira zvizorwa yekuchenesa nzvimbo, kuunzwa kweGerman 6000-mavara ekudhinda muchina, Taiwan otomatiki skrini yekudhinda muchina, Taiwan otomatiki kugaya uye kucheka muchina, Japanese chaiyo murabhoritari michina. Kambani yakapasa BSCI social responsibility system certification, ISO4 quality system certification, zvigadzirwa zvakapasa SGS certification, FDA certification, uye inofambirana neUnited States uye European Union yepasi rose cosmetics zviyero. Nokuti ikozvino isu anoshumira vatengi kupfuura nyika 9001, akadai Japan, United States, Italy, France, Germany, South Korea uye zvichingodaro. Kuburitsa kwepasirese huwandu, zvisinei kuti unobva kupi, unogona kunakidzwa nazvo.
Iyo kambani yakapasa BSCI yemagariro mutoro system chitupa, ISO9001 yemhando system chitupa, zvigadzirwa zvakapfuudza SGS chitupa, FDA chitupa, uye zvinoenderana neUnited States uye European Union epasi rose zvimedu zvekuzora.
Kutakura & kutumira
Maitiro ekushandisa gel chipikiri wraps?
Danho 1: Smooth mbambo nefaira rezvipikiri. Danho rechipiri: Chenesa pamusoro pezvipikiri. Danho rechitatu:Sarudza rifht saizi.
Nhanho yechina: Isa pane zvipikiri zvefunger. Nhanho5: Cheka iyo yakawandisa gel chipikiri. Danho rechitanhatu: Geza gel chipikiri ye6s.
Nzira yekubvisa sei gel nail wraps?
Danho 1: tsvimbo yekusimudza gel chipikiri kuputira
Danho rechipiri: Geza nzara dzako nemapedhi edonje.
Kupisa Kutengesa Kisimusi Kuunganidzwa 100% Nail Polish Strips Nail Warps Nail
Nail Polish Inosvina Gel Stickers Yakazara zvipikiri Inoputira Glossy Manicure inoputira
Fekitori mutengo OEM tsika dhizaini zvipikiri art
Zvitsva zvitsva zvipikiri zvipikiri zvipikiri art yeKrisimasi zvipikiri zvemhizha
OEM halloween mbambo inoputira inopenya murima holole art
Kupisa Kupisa Zvidhori self Adhesive Asina-chepfu 100% chaiyo zvipikiri zvekupfekedza mitsetse
Factory Mutengo Yakagadziridzwa Gel Shinning chipikiri chePoland chiiputira, Nail Sticker
Gel Nail Kuputira Wholesale fekitori mutengo HUIZI semicured gel chipikiri chinamirwa
ChiKorea chimiro chitsva chejeri chipikiri ne UV mwenje gel zvipikiri zvinoputira
Wholesale inopisa kutengeswa 2021 nyowani zvipikiri zvipikiri gel zvimiti zvine UV mwenje
Itsva Kusvika Tsika Yemhando Yekushongedza chigunwe Chipikiri Chiputiro Hui Zi Yakakwira Yemhando Nail Stickers